6 Hiwayaddooda oo Taageero Sirdoonka Nolosha |
1 – Akhriska: Hadii aad wax badan akhrido ahna mawduucyo kala duwan waxaad fahmee waxbadan. Akhriska wuxuu kaa caawinayaa in aad yareyso walaac iyo walbahaarka.wuxuun kaa dhigaa inaad la kulanto caadifado kala duwan oo aad ku kasbato dhaqamo kala duwan. waxyaabahan oo dhan waxay kaa dhigayaan inaad naftaada ku fiicantahay heerka sirdoonka.
2- Fekerka: Faa’iidada ugu muhiimsan ee fekerka waa in uu kaa caawiyo in aad si wacan u ogaatid waxa jiro.sidoo kale waxay kaa caawineyaa in aad diirada saarto maskaxdaadu wax yaabaha muhiibka ah.
3- Jimicsiga Maskaxda: Si aad u ilaaliso maskaxdaada waxaad u baahan tahay inaad maskaxdaada ku tababbarto siyaabo badan sida xalintadhibatooyinka, Diyaarinta baraamishyo cusub iyo kuwa kale. iyaga oo loo marayo nashaadyo kale dugan sida hal-abuurka, horumarinta aragtidaada iyo waxyaabo kala duwan. Sidaas darted ayaa jimicsigu waxuu sahlayaa in aada hesho nashaada badan.
4 – Baro luqad cusub: Barashada luuqad cusub masahlana. laakiin waxay leedahay waxyaabo badan oo kaa caawin kara inaad fahamto ereyada cusub iyo falanqaynta qaabdhismeedka naxwe ahaaneed. wuxuu sare u qaadaa caafimaadka jirka iyo caafimaadka maskaxda. Dadka bartaan luuqado cusub waxay awooda u helaan qorsheynta go’aano adag iyo xalinta mushkiladaha. sababtoo ah waxay leeyihiin heer sir ah oo afka luqadeed.
5 – Qorista: Qorista badanaa waxay muujinaysaa in ay jirto sirdoon, waxaana jira faa’iidooyin badan oo qorista gaar ahaan muujinayo dareenkaaga, waxaa laga yaabaa in ay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee sabbabi karo guushaada balse aadna ogayna. waxay hagaajiyaan awoodahaaga luqadeed waxayna kaa caawin doonaan inaad horumariso fahamkaaga, xoojinta xusuustada iyo xirfadaha hal abuurkaga.
6- Socdaalka meelo cusub:Socdaalku ma ahan habka looga takhaluso jilicsanaanta laakiin waxuu leeyahay faa’iidooyin fara badan oo laga yaabo in aad barato dadka faro badan. goob kasta oo aad u socotid waxay ku barayaan waxyaabo cusub oo ku saabsan dadka, dhaqanka, nolosha, cuntada iyo bulsho laga yaabo in aad ka hesho fikrado cusub.
Tags: 6 Hiwayaddooda oo Taageero Sirdoonka Nolosha
Next post Waa Maxay Waddani?
Previous post Siyaabaha Loo Kordhiyo Awoodda Xasuusta Maskaxda